Fault at Google Translate [ Nepali Language ] - Own Things ~ आफ्नै कुरा
Fault at Google Translate [ Nepali Language ]
प्रकाशित गरिएको मिति : 11 December 2013
आज अफिसमा बसेर यसो साथीहरुको Twitter हेर्दै थिए ! फ्याट एउटा टुइटर बाट थाहा पाए कि Google Translate ले नेपाली फन्ट लाइ पनि समेट्न भ्याई सकेको रहेछ ! यसले अब इन्टरनेटमा नेपालीहरुको पहुच पक्कै पनि बढ्ने देखाउछ ! अनि खुसी लागेको छ आफ्नो कुरा अब विश्वको कुनै पनि कुनामा त्यहिको स्थानीय भाषामा पुर्याउन सकिने'छ भनेर अनि त्यहाको कुराहरु आफ्नै नेपाली भाषामा पढ्न पाइने छ ! यस बारेमा मैले यहि ब्लगमा पहिलो पटक ( Friday 12 Aug 2011) र दोस्रो पटक (Monday 13 May 2013) "नेपाली भाषा लाइ गूगल ट्रान्सलेट मा समावेस गराउन पहल गरौ" भन्ने अपिल गरेको को थिए ! साथै यहि कुरा लाइ आफुले जानेको र सकेको वेब आफिसिएलमा सक्दो मेल र शेएर गरेको पनि थिए ! तर त्यस बारेमा त्यस भन्दा बढी कुनै चित्बुझ्दो जानकारी लिन र प्रयास गर्न भने भने थिन सकेको थिन ! तर आज एक्कासी यो सब कुरा सम्भव भएको देख्दा औधि खुसि लाग्यो र दु:ख पनि ! गूगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषालाइ यस्तो कम्जोर अवस्था देखाएर ब्याजत गराइयो जस्तो लाग्छ त्यसैले मलाइ गूगल ट्रान्सलेटमा नेपाली भाषा समावेस भएकोमा खुसी भन्दा बढी दु:ख लागेको छ !
Google Translate के हो भनेर जान्न चाहनु हुन्छ भने यहाँ Click गर्नुस !
हेर्नुस तल चित्रमा गूगलको ट्रान्सलेट पेजमा नेपाली फन्टको लिस्ट समाबेस भएको देख्न सक्नु हुने छ !
चित्र नं. १
दु:ख यो मानेमा कि तपाइँ आफै गुगल ट्रान्सलेट गएर कुनै अरु भाषामा केहि कुरा लेखेर नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर हेर्नुस या नेपालीमा केहि लेखेर अरु कुनै भाषामा ट्रान्सलेट गरेर हेर्नुस ! भाषिक गल्ति हदै मात्रामा पाइन्छ ! यस्तो गल्ति सच्याउन सम्बन्धित निकाय / टिम / सस्था अझ शशक्त भएर लागोस भन्ने चाहन्छु ! नत्र त नेपाली भाषा र भाषा विद अनि आइटी टेक को पनि ब्याजत मात्र भएको ठानिने'छ !
तल चित्रमा उक्त कुरा प्रष्ट देख्न सक्नु हुने'छ !
चित्र नं. २
चित्र नं. ३
ढिलै भए पनि नेपाली भाषा र नेपाली प्रसंगहरु (कला, साहित्य, संस्कृती तथा घटना ) लाइ विश्व सामु पुर्याउने भएको यो प्रयासको लागी म सम्बन्धित पक्षलाइ मुरी मुरी धन्याबाद तथा कृतज्ञता जाहेर गर्दछु साथै यसमा भएको त्रुटी लाइ यथा सक्य चाडो सुधार गरियोस भन्ने चाहन्छु ! धन्यबाद !!
0 Comment / प्रतिक्रिया लेख्नुहोस